सशस्त्रको इन्सपेक्टर बढुवामा चलखेल « Drishti News – Nepalese News Portal
५ जेष्ठ २०७९, बिहिबार 5:38 pm
डीएसपीमा बढुवा भएहरु
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीको इन्सपेक्टरबाट डीएसपी बढुवामा ठूलो चलखेल भएको तथ्य फेला परेको छ । काठमाडौंको बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा इन्सपेक्टर दर्जामा कार्यरतहरुको डीएसपी बढुवमा चलखेल भएको हो ।
योग्यता नपुगेका र बढुवाको सूचीमै नभएकादेखि सूचीको ९ नम्बरमा भएका व्यक्तिलाई ३ नम्बर र १ नम्बरमा भएकालाई ५ नम्बरमा राखेर बढुवा गरिएको भेटिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरीले २०७९ वैशाख ७ गते अस्पतालमा कार्यरत ६ जना इन्सपेक्टरलाई डीएसपीमा बढुवा गरेको थियो ।
प्रकृयाअनुसार २०७१ सालमा इन्सपेक्टर दर्जामा भर्ना भएका ९ जना एमबीबीएस डाक्टरबाट ६ जनालाई बढुवा गर्नुपर्ने हो । तर, अस्पतालमा कार्यरत एमबीबीएस डाक्टरलाई छोडेर सूचीमै नपर्ने नर्सहरुलाई समेत बढुवा गरेकाे आरोप लागेको छ ।
२०७१ सालमा ९ जना एमबीबीएस डाक्टर एकैपटक इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका थिए । डा. अपूर्व श्रेष्ठ, डा. नेत्रबहादुर कार्की, डा. सुमन लामिछाने, डा. सन्दीप द्वारे क्षेत्री, डा. सन्तोष बजगाई, डा. ओमप्रकाश पटेल, डा. समीर केसी, डा. दयानन्द साह र डा. शोभा डंगोल एकैपटक इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका थिए ।
क्रमस १ नम्बर देखि ६ नम्बरका डा. अपूर्व श्रेष्ठ, डा. नेत्रबहादुर कार्की, डा. सुमन लामिछाने, डा. सन्दीप द्वारे क्षेत्री, डा. सन्तोष बजगाई र डा. ओमप्रकाश पटेल बढुवा हुनुपर्ने थियो । तर, सशस्त्रले वैशाख ६ गते भने क्रमस १ देखि ६ नम्बरमा राखेर नर्स सुनिता श्रेष्ठ, नर्स अञ्जली महर्जन, डा. शोभा श्रेष्ठ, डा. सन्तोष बजगाई, डा. अपूर्व श्रेष्ठ र डा. नेत्रबहादुर कार्कीलाई बढुवा गरेको छ ।
बढुवाका क्रममा डा. अपूर्व श्रेष्ठको नाम १ नम्बरमा हुनुपर्नेमा सूचीमै नरहेका नर्स सुनिता श्रेष्ठलाई १ नम्बरमा राखेर बढुवा गरिएको छ । २ नम्बरमा राखेर बढुवा गरिएका नर्स अञ्जली महर्जनको नाम पनि बढुवाको सूचीमा थिएन ।
त्यस्तै, भर्नाका क्रममा ९ नम्बरमा रहेका डा. शोभा डंगोललाई ३ नम्बरमा राखेर बढुवा गरिएको छ । बढुवा गर्दा ५ नम्बरमा हुनुपर्ने डा. सन्तोष बजगाईलाई ४ नम्बरमा राखेर बढुवा गरिएको छ भने २ नम्बरमा बढुवा हुनुपर्ने नेत्रबहादुर कार्कीलाई ६ नम्बरमा राखेर बढुवा गरिएको छ ।
भर्ना नम्बरका आधारमा ३ नम्बरमा डा. सुमान लामिछाने, ४ नम्बरमा डा. सन्दीप द्वारे क्षेत्री र ६ नम्बरमा डा. ओमप्रकाश पटेल बढुवा हुनुपर्ने हो । तर, सूचीभन्दा बाहिरकालाई ल्याएर बढुवा गरिँदा लामिछाने, क्षेत्री र पटेल भने बढुवामै परेनन् ।
सशस्त्रको बढुवाका लागि वहालवाला सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, एक डीआइजी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको बढुवा समिति बन्ने गर्दछ । वैशाख ७ को बढुवाका क्रममा तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी प्रमुख पुष्पराम केसी, डीआइजी नारायणदक्त पौडेल र गृहमन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य थिए ।
सशस्त्र प्रहरीको बढुवामा कार्यसम्पादन मुल्याङ्नलाई मुख्य आधार मानिन्छ । कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका क्रममा अस्पतालका डीएसपीबाट १०, अस्पतालका एसपीबाट १०, अपस्पताल प्रमुखबाट १०, प्रधान कार्यालबाट १० र चुनौतीपूर्ण काम गरेवापत ५ नम्बर दिने गरिन्छ । त्यसपछि बढुवा समितिले ५ नम्बर दिने गर्दछ ।